Zibambisa ongezansi izimanga zeWimbledon – Bayede News
Liqhakaze okweNdonsa entathakusa ikusasa likaCori
Posted on 10 July 2019 by Bayede-News
UCori “Coco” Gauff
Liqhakaze okweNdonsa entathakusa ikusasa likaCori Gauff
UCORI “Coco” Gauff oneminyaka eyi-15 ogile izimanga kuqala umqhudelwano iWimbledon ehlula uVenus Williams ngo-6/4, 6/4, esigabeni sesibili wahlula uMagdaléna Rybáriková odabuka eSlovakia okeliswe endaweni yama-252 emhlabeni emhlula ngo-6/3, 6/3, esigabeni sesithathu wahlula uPolona Hercog odabuka eSlovania okleliswe endaweni yama-60 emhlabeni, esigabeni sesine ube esehlangana nezimbila zithutha ehlulwa uSimona Halep odabuka eRomania nokleliswe endaweni yesikhombisa emhlabeni ngo-6/3, 6/3 ngoMsombuluko.
Ukudlala kahle kwale ntokazi esencane kuyivulela iminyango eminingi, inkampani engamele lo mdlali osemncane ibika ukuthola izingcingo ezingapheli ezivela kubaxhasi abafisa ukuzibandakanya nalo mdlali emveni kokubonakalisa ubuhlakani nokuzinikela kulo mqhudelwano. Kulindeleke ukuba akhuphuke ekuklelisweni kwabadlali emhlabeni angene kwabangama-150 emveni kokudlala kahle kwakhe. Usebheke ukwenza kahle kwi-US open ezodlalwa ngoNcwaba kuya kuMandulo e-United States of America (USA).
Eminye imiphumela ehlabahlosile
U-Ashleigh Barty odabuka e-Australia ohamba phambili emhlabeni, ongumpetha weFrench open uhlulwe nguAlison Riske odabuka eUnited States of America okeliswe endaweni yama-55 ngo-6/3, 2/6, 3/6. USerena Williams oseyinqobe izikhathi eziyisikhombisa iWimbledon uzidlele amahlanga kuCarla Suarez Navarro odabuka eSpain okeliswe endaweni yama-31 emhlula ngo-6/2, 6/2.
URoger Federer odabuka eSwitzerland okleliswe endaweni yesibili kuWimbledon, osenqobe lo mqhudelwano kasi-8 uthele uMatteo Berrettini odabuka e-Italy okleliswe endaweni yama-20 ngehlazo emhlula ngo-6/1, 6/2, 6/2. Wenze okufanayo noNovack Djokovic odabuka eSerbia okleliswe endaweni yokuqala emhlabeni uhlule u-Ugo Humbert odabuka France oneminyaka engama-21 emhlula ngo-6/1, 6/2, 6/3. URafael Nadal odabuka eSpain okeliswe endaweni yesithathu iWimbledon uhlule uJoao Sousa odabuka ePortugal okleliswe endaweni yama-69 emhlula ngo-6/2, 6/2, 6/2.
UKevin Anderson odabuka kuleli okleliswe endaweni yesine iWimbledon uhlulwe uGuido Pella odabuka e-Argentina nokleliswe endaweni yama-26. U-Anderson usebheke ku-US open ukubuyisa isithunzi sakhe.
IWimbledon yanonyaka ethanyelwe yizibukeli eziqhamuka emazweni ehlukene emhlabeni isakhombisa ukuba wumqhudelwano wethenisi ohamba phambili nohlale uqhamuka nokungalindelekile. Ompetha abaningi emhlabeni bazibalule ngalo mqhudelwano. Kusukela ezinsukwini zoBoris Becker kuya koPete Sampras kwabesilisa, kusuka koMartina Navratilova kuza koSerena Williams kwabesifazane iWimbledon ihlale igila izimanga nokuqhamuka nabadlali abasha abazomangaza umhlaba. Nakulokhu yenze okufanayo yabambisa umhlaba ongezansi ngokuqhamuka kungalindele muntu noCORI “Coco” Gauff.`